Kalfadhigi ugu dambeeyay ee Baarlamanka oo maanta furmaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 10 April 2016
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta furo Kalfadhiga Sideedaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ahana kii ugu dambeeyay ee baarlamanka ayaa maanta ka furmaya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa sheegay in kalfadhigan Sideedaad uu noqonayo kii ugu dambeeyay, isagoo ugu baaqay Xildhibaanada inay ka soo qeyb galaan.
Guddoomiye “Jawaari” ayaa sheegay in kalfadhigan uu yahay mid muhiim ah, isla markaana loo baahan yahay dhamaan sharciyada hor-yaala Baarlamaanka la meel mariyo.
Kalfadhigan 8aad ee Baarlamaanka ayaa lagu wadaa in lagu meel mariyo sharciyo dhowr ah oo hor-yaala Baarlamaanka, waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka Argagixisada.